Aan Ooyee Albaabka Ii Xidha - Hoygamaansada
by Maxamed Xaaji Ismaciil Maxamuud (Barkhad Cas)
Awawgay ninkii adoonsaday ninkii aabahay indhaha tiray ninkii anigana i iibsaday hadaan arkayoonan ka aarsan karayn hadaanan Aadanow unuunka jarayn aan ooyee albaabka ii xidha. Isagoo Iglan joogabuu i diloo ushuu soo fidshaa i iimaysoo waataa aramidii i oofa tirtaye itaal dari aan la eedaadoo aan ooyee albaabka ii xidha. Bal oggow isticmaarku abidkii iriduu marinaayo awr raran irbadbuu ku dayaa ayaamaa horee Ragan aan arkayee u abasaxayow ninowna ha odhan soomaalaan ahee ordoo magacana ka iibsada. Libaaxa anayiyo Abaarso ka ciyay Abu Riin Lo'da joogtabaa urisoo ooday jebisaa intay u dhacdoo amsaxuu ka guraa idiilkeede waakaa isticmaarkii ii daayee Ragan aan arkayee u abasaxayow in shaahiyo keegu waa urugee iimawdee axankaaga weynee. Ugaadha ninkii gatee urursada ka soo arkabaa aduun ka baxshee ninkaa imanaaya awgii waa kaa isticmaarkii ii daayee Ragan aan arkayee u abasaxayow ordoo magacana ka iibsada.